“ အင်း..သေခြင်းတရားဟာ..ရှင်သန်တတ်ကြွခြင်းနဲ့..ကျောခြင်းကပ်နေယုံလေးပါလား..” ဆိုတာလောက်တော့..လူတိုင်းလို..သံဝေဂ ရမိကြမှာအမှန်..
“ ကြည့်ပါဦး..လူတွေသယ်ထုတ်လာတာ..” လို့..စိတ်ဝင်တစားပြောသော်လည်း..ဘိုးတော်လုပ်သူက..
“ အမလဲ..စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်နော်..” လို့..အတည်ပြုရင်း အဖော်ညှိတယ်..
“အေးလေ..အဲဒါ..ကျွန်မကလဲရိုးရိုးသားသားစိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ယောက်ကျားကို ဖုန်းလှမ်းဆက် တော့..သူက..အေး..စိတ်မကောင်းရင်..ဒွေးကားဟောင်းတွေပြန်ဖွင့်ကြည့်နေပေါ့လို့ပြောတယ်..”
အင်း..အနုပညာရှင်..(အထူးသဖြင့်..ပြည်သူချစ်သောအနုပညာရှင်) ဆိုတာ ..လူတွေရဲ့အာရုံကို အစွဲဆောင်နိုင်ဆုံးပါလားလို့လေ...
သတင်းတခုထဲမှာတောင်တွေ့လိုက်တယ်..ဒွေးသတင်းက..ဇူလိုင်၁၈ ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့ အမျိူးသားညီလာခံ ထက်တောင် လူစိတ်ဝင်စားမူပိုရသွားတယ်ဆိုပဲ..
Yahoo ရဲ့ the most search ဆယ်ခုမှာ အမြဲလို..အဲဒီ celebrity များသာ အမြဲဗိုလ်စွဲနေတာ သာကြည့်...
အင်ဂျလီနာဂျိူလီ..ကလေးတွေမွေးစားတော့..(သူအရင်တုံးကဘာတွေဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့..) နတ်သမီးလေးတပါးလို ချီးမွမ်းခန်းဖွင့်ရင်း ကလေးမွေးစားတာတွေ..ခေတ်စားလာသည်။
ဘိုနိုက..အာဖရိက..ဆင်းရဲမွဲတေမူ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်.. လှုံ့ဆော်တော့.. သူကိုယ်တိုင်က.. ဘယ်လောက်..ပိုက်ဆံတွေဖြုန်းတီးတယ်ပဲဆိုဆို...တကမ္ဘာလုံးအာရုံစိုက်ခံရသည်။
Very true. People are just more interested about celebrities and what they do more than politics (like the ongoing diplomatic pressuring by UN on Burmese issues) and other things that are actually more important. I was surprised that the Burmese website of The Irrawaddy even covered Dwe's funeral, but thankfully it didn't appear on the English version.
ကျွန်တော်လည်း တရာ ရတယ်။ ဘာမှ မယ်မယ်ရရ မလုပ်ရသေးပဲ လောကထဲက ပျောက်မသွားချင်ဘူး။
မြန်မာ ကျော်ကြားသူတွေ လူမှုရေးမှာ အရင်ကထက် ပိုမိုလှုပ်ရှားလာတာတော့ အားတက်စရာပါပဲ။